I-Alex ephezulu yeFamily Villa ene-pool yabucala kunye ne-AC
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguTanya
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uTanya iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Wamkelekile kuAbu Talat!
Ukuba ungathanda ukuya kwindawo yokuphumla kunye nosapho lwakho (okanye abahlobo), kude nengxolo kunye nomsebenzi, le yindawo onokuba kuyo! Yiba namava e-Alexandria-Abu Talat ngendlela entsha, hlala kwindawo entle enomtsalane yabucala enedama lakho (ubunzulu 1.60 - 2.50), kunye negadi ethandekayo eyi-300 m2 enebarbecue.
I-villa yimizuzu emi-3 kuphela yokuhamba ukusuka elunxwemeni.
Sinompheki onokulungiselela ukutya ngexabiso elifanelekileyo, kodwa ukuba ukhetha ukuzenzela, nceda wenze!
I-villa inokuhlala iindwendwe ezi-8 kumagumbi okulala ama-4. Igumbi lokulala eli-1 kumgangatho ophantsi kunye namagumbi okulala ama-3 kumgangatho wokuqala, ngalinye linendawo yokupholisa umoya entsha. Onke amagumbi okulala kumgangatho wokuqala ahamba nendlu yawo yangasese kunye neshawari.
Ikhitshi lifumaneka ngokupheleleyo kwaye liza nazo zonke izixhobo ezifunwayo, kubandakanya ifriji entsha enkulu yaseMelika, isitofu segesi esinecombi ye-oveni, kunye nemicrowave.
Kukho itafile enkulu yokutyela, indawo yokuhlala/ulwamkelo enescreen esikhulu sikamabonakude esitsha.
Umphandle we-villa yindlela yaseYiputa kunye nesitayela saseYurophu. I-villa ihonjiswe ngemizobo emihle.
Ikhompawundi encinci ekhuselweyo ineevillas ezi-2. I-villa ene-pool yangasese iyafumaneka kwiindwendwe zethu.
Kukho ithala leencwadi elincinane elineencwadi zabantwana, ezinje ngeDiary of the Wimpy kids, Hunger games, Ender games njalo njalo.
Wi-Fi iyafumaneka simahla.
Uya kuba nevilla yakho.
ICarrefour Borg el Arab ikumgama oziikhilomitha ezili-9, kwaye umbindi wesixeko sase-Alexandria umalunga nemizuzu engama-25 ngemoto.
Airport Borg el Arab (HBE) yi 25 imizuzu ngemoto.
Unxweme loluntu lwendawo luyimizuzu emi-3 umgama wokuhamba.
Uhambo oluhle lwabantwana yi-Africa Safari Park kwindlela eyintlango yase-Alexandria. Okanye ipaki yeAqua, nakwindlela yasentlango.
Kukuhambo lokuhamba ukusuka e-Abu Talat kwindlela enkulu apho unokufumana khona ukutya esitratweni, iziqhamo kunye nemifuno ngamaxabiso afanelekileyo.
Singathanda ukwazi iindwendwe zethu, kodwa ukuba bakhetha ukuba nezabo zabucala siyayihlonipha ngokupheleleyo loo nto.
Iilwimi: العربية, Nederlands, English, Français, Deutsch